LibreOffice 6.1 ichauya muna Nyamavhuvhu ine chiitiko chitsva chepamhepo | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.1 ichauya muna Nyamavhuvhu ine chiitiko chitsva chepamhepo
Mazuva apfuura takataura newe nezve iyo miriyoni yekurodha chinangwa icho LibreOffice yakapfuura mavhiki maviri chete mushure mekutanga kwayo, muchiziviso chimwe chete, Mike Saunders, Marketing Assistant weThe Document Foundation, akataura kuti mainjiniya ari kushanda iyo inotevera yekuvandudza iri kuuya muna Nyamavhuvhu.
LibreOffice 6.1 ichave yekutanga kuvandudza kweLibreOffice 6.x uye ichawedzera akawanda maficha uye kugadzirisa izvo zvatichazokuudza iwe pazasi.
Chii chitsva cheLibreOffice 6.1
Pakati penyaya dzese uye zvidzoreso zvinouya neLibreOffice 6.1 tinogona kutaura iyo kugona kurongedza mifananidzo muCalc, pamwe nekudzikurisa kuti ikwane peji kana sero.
Munyori achange aine runyorwa nyowani rwezvitaera, kugona kuisa iyo peji peji, rutsigiro rwekutwasuka mavara anoshandiswa mune echinyakare Chinese mutauro uye kugona kubvisa ideographic kuteedzana nebara rekudzoka.
Calc ichave nesarudzo nyowani dzemamenu ezvinyorwa uye mirairo mitsva yekuti iyo sarure iri mune yakasarudzika nzvimbo kana munda une mamiriro. Dhirowa ichave ine peji nyowani menyu, Munyori achakwanisa kuendesa maRuby mavara kuDOCX fomati, pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda.
Kune rimwe divi, LibreOffice inovimbisa kugadzirisa chikamu chepamhepo, icho chinobvumira vashandisi kushandisa zvakakosha LibreOffice mabasa kuburikidza newebhu browser.
Iye Munyori Chikamu che LibreOffice Pamhepo iwe uchagamuchira madhibhokisi matsva, sarudzo yekutsvaga nekutsiva, girama uye chiperengo, kuverenga uye mabara, zvinyorwa zvakabatanidzwa, mavara akasarudzika uye zvivakwa zvematafura.
Chikamu cheCalc chinotendera vashandisi ku wedzera autofilters uye inogonesa chinhu firita kuburikidza nema autofilters popup. Pakupedzisira, LibreOffice 5.1 ichawedzera mitauro mitsva nemaduramazwi.
LibreOffice inopinda beta kuitira kuyedzwa neruzhinji pakupera kwaApril, ichipinda muchikamu chekupedzisira chebudiriro muna Chivabvu. Kana zvese zvikafamba mushe, zvinosvika zviri pamutemo pakati paNyamavhuvhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 6.1 ichauya muna Nyamavhuvhu ine chiitiko chitsva chepamhepo
East Zone muSão Paulo. Chii chandinogona kushandisa maforodha? http://surgeofsouls.com/mybb/index.php?action=profile;u=68166
Uku ndiko kuvandudzwa kushanu kunounzwa neVnu Gnu / Linux vashandisi
Chinja makwara emafaira ako ega